भेटेरिनरी पसलको व्यापार नाफामूलक हुँदै गएको छ /संवाद – Newsagro.com :
October 22, 2016 December 12, 2016 NewsAgro0Comments Agriculture Online newsagro.com न्युज एग्रो डट कम, Dr. Sitalkaji Shrestha डा.शितलकाजी श्रेष्ठ, Farmer किसान, Goat खसीबोका, livestock जीवजन्तु, Veterinary भेटेरिनरी, गाई Cow, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन Nepal Veterinary Association, भैँसी Buffalo
यो समाचार 518 पटक पढिएको
डा.शितलकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन
भेटेरिनरी पसल खोल्न के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
विद्यमान ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार जीवजन्तुलाई चाहिने औषधि पसल खोल्न बिफार्म (ब्याचलर इन फर्मास्युटिकल्स) गरेको हुनुपर्छ । तसर्थ कुनै व्यवसायीले भेटेरिनरी पसल खोल्न चाहे बिफार्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको मानिसलाई राख्नुपर्छ । यसअघि औषधि व्यवस्था विभागले भेटेरिनरी पसल सञ्चालन गर्न खोज्नेलाई एकमहिने तालिम दिइन्थ्यो र तालिमपछि परीक्षा हुन्थ्यो । परीक्षा पास गर्ने व्यक्तिले पसल खोल्न सक्ने प्रावधान थियो । तालिमका लागि न्यूनतम ८ कक्षा पास गर्नुपर्ने सर्त थियो ।
गाईवस्तुपालन बढीजसो गाउँतिर हुन्छ र पसल बजारतिर मात्रै राम्ररी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा भेटेरिनरी पसल कस्तो स्थानमा राख्दा उपयुक्त होला ?
भेटेरिनरी पसल सदरमुकामकेन्द्रित भइरहेको अवस्था छ । यसलाई घटाएर हामीले इलाकास्तरमा राख्न सके बढीभन्दा बढी किसानलाई नजिकैबाट सेवा दिन सकिन्छ । मुलुकभर पशु सेवा केन्द्रका कार्यालय छन् । त्यस्ता कार्यालयको छेउछाउ पारेर पसल राख्न सकियो भने धेरै लाभ लिन सकिन्छ । किनभने, गाउँमा गाई–भैँसी, राँगा, गोरु, बाख्रा, भेडा पाल्ने किसान पशु सेवा केन्द्रमा सेवा लिन पुग्छन् । त्यसवरपर पसल राखियो भने किसानलाई पनि औषधि किन्न सुलभ हुन्छ र पसलको कारोबार पनि राम्रो बन्न जान्छ । सहरतिर कुकुर, बिरालो, कुखुरापालन बढिरहेको छ । तसर्थ सदरमुकामकेन्द्रित गरेर पनि भेटेरिनरी पसल खोल्न सकिन्छ ।
भेटेरिनरी पसलमा कस्ता औषधि धेरै राख्नु राम्रो हुन्छ ?
पसलमा रोग लाग्न नदिने र रोग लागिसकेपछिको उपचारमा प्रयोग हुने दुई थरी औषधि राख्न सकिन्छ । रोग प्रतिरोधात्मकका लागि जुकाको औषधि, भ्याक्सिन, भिटामिनलगायतका औषधि राख्न सकिन्छ । त्यस्तै, मौसमी रोगअनुसारका औषधि राख्ने, पसल भएको क्षेत्रमा बढी कुन जनावर पालिएको छ, त्यसलाई दृष्टिगत गरी औषधि राख्न सकिन्छ । किनभने, गाई–भैँसी, भेडा–बाख्रालगायत जनावरपिच्छे औषधि फरक हुन्छ । सामान्यतया जनावरमा बढी नाम्ले पर्ने, ज्वरो आउने हुन्छ । यस्ता रोग निको पार्ने औषधि राख्न सकिन्छ । पसलनजिकै पशु चिकित्सक छन् र किसानले बारम्बार पशु चिकित्सकबाट सेवा लिन सक्ने अवस्था रहन्छ भने त्यस्ता स्थानमा भेटेरिनरी पसल खोल्दा पर्याप्त मात्रामा सिरिन्ज, स्लाइन पानीका बोतल राख्न सकिन्छ । चोटपटक निको पार्ने औषधि पनि राख्न सकिन्छ ।
भेटेरिनरी पसल सञ्चालन गरेर कत्तिको मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ ?
अहिले मुलुकभर व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्ने क्रम बढेको छ । व्यावसायिक पशुपालनबाट जीवजन्तुको संख्या पनि बढ्ने हुँदा यस किसिमको व्यवसायको भविष्य उज्ज्वल छ । अहिलेको अवस्थामा भेटेरिनरी पसल सञ्चालन गरेर घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । पसल सञ्चालकको उधारो रकम उठ्न सकेन, कम गुणस्तरको औषधि राखेर बदनाम भयो भने अर्कै कुरा हुन्छ नत्र गुणस्तरीय औषधि मात्रै राख्ने, डाक्टरले सिफारिस गरेअनुसारका मात्रै औषधि बिक्री गर्ने हो भने राम्रै आम्दानी लिन सकिन्छ ।
भेटेरिनरी पसल सञ्चालन गर्न सुरुको लगानी कति लाग्छ ?
सदरमुकामबाहेक इलाका वा गाउँ स्तरमा आधारभूत औषधि राखेर करिब २ लाख ५० हजार रुपैयाँमा भेटेरिनरी औषधि पसल सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
भेटेरिनरी पसल खोल्न केही नीतिगत वा व्यावहारिक समस्या छन् ?
हो, अहिले नीतिगत रूपमा केही समस्या छन् । भेटेरिनरी र ह्युमन फार्मेसी दुई अलग विषय हुन् । यिनको पढाइ पनि अलग–अलग हुन्छ । तर, भेटेरिनरी पसल खोल्न ह्युमन फार्मेसी पढ्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ जुन अव्यावहारिक र तर्कहीन छ । भेटेरिनरी पढेका डाक्टरले नै भेटरिनरी औषधि पसल खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । भेटरिनरी पढेर फेरि ह्यमुन फार्मेसीका लागि मेडिकल साइन्स पढ्नुपर्ने व्यवस्था हट्नुपर्छ ।
← नेपाललाई अण्डामा आत्मनिर्भर घोषणाको तयारी
गाई फार्मले फेरियो जीवनस्तर →
यो समाचार 30409 पटक पढिएकोबुटवल । रूपन्देही मत्स्य ह्याचरीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । माछाको पकेट जिल्ला रूपन्देहीमा माछाका भुरा उत्पादनमा
यो समाचार 30085 पटक पढिएकोरासायनिक मल अनियमितता प्रकरण काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद
यो समाचार 21515 पटक पढिएको GM Food Crops Illegally Growing in India • By Colin Todhunter The GM Contamination Register database is run
यो समाचार 2415 पटक पढिएकोम्याग्दी, मङ्सिर १६ गते । जिल्लाका किसान यान्त्रिक हलोतर्फ आकर्षित भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका किसानले